Xuddun iyo Mandheer | Somaliland Post
Home Maqaallo Xuddun iyo Mandheer
Xuddun iyo Mandheer
Qolkii maydhashada ee gurigayga ayaan is dhex taagay, waanaan qubaystay. Intii aan jidhkayga biyaha tuwaalka kaga tirtirayay ayaan isku eegay muraayad weyn oo qolka ku dhex tiillay. Waxana indhahayga si gaar ah u soo jiitay xuddunta ku kala badhan bogcalooleedkayga. Waxayna indhahayga u soo jiidatay si ka duwan sidii ay hore iigu muuqan jirtay. Ugu horrayn waxa yaab i geliyay falsuubbanaanta uu Eebbe (sarree oo korreeye) ku kala badhay caloolsha; waxana aan is-weyddiiyay, bal haddii ay meesha ka maqnaan lahayd, miyaanay meeshaas ka muuqateen dhinnaansho, foolxumo iyo kala-dhantaalnaan? Waxa kale oo maankayga ku soo dhacay in raadkaasi yahay mid ka goonni ah jidhka intiisa kale, maxaa yeelay, ma jiro qayb ama xubin kale oo jidhka aadamaha ka mid ah oo sideeda oo kale adeegsigeedu mar qudha uun yahay. Xudduntu se isla kolkii qofka ay ku taallay madaxa ifka ula soo baxay ayuu waxtarkeedi soo gebageboobay!
Mar labaad baan jalleecay xudduntii, waxana iiga muuqday wax ka badan astaan dhalasho; waxana ay tilmaan u tahay dhibtii ay hooyo ila soo martay – laga soo bilaabo wallaceedii, sidkii ay sagaal bilood uurka igu sidday, dhiiggii hodonka ku ahaa hawadii ogsajiinta iyo nafaqadii aan la wadaagi jiray. Si kale haddii loo dhigo, waxba kama aanan duwanayn deris-ku-noole nuugaya jidhkeedii. Waxa ay mararka qaarkood cuskan jirtay udubdhexaadka aqalkayagii, tamardarro awgeed iyo iyada oo ka baqo qabtay in ay diiddo, dhulkana ka soo go’do. Haddaba iyada oo aan jidhkeeda iyo nafteeda waxaas oo howl iyo culays ah ku hayay ayaanan haddana ka daynin gujooyin hoose oo ay mararka qaar hurdada ledi weydo.
Eedaadkii foosha iyo taaheedii ayay mararka qaarkood nafteedu hoos ugu sheegi jirtay in aanay dib ugu noqonin ilmoqaadis kale. Ha yeeshee, sunnaha nolosha ayaa sidaas ah, oo haddii aanu jirin rabitaankaasi, aadamuhuba waa tafiirgo’i lahaa.
Haa, aniga iyo hooyaday isku mid baannu ahayn, se xidhiidhkaasi jidheed waxa uu kala go’ay isla markii ay ummulisadi, oo gacmaheedii farsmoyaqaanka ahaa (oo ay weliba taageero ka helaysay dihashadeedii ay seedaha ilmagaleenkeeda kusoo ururinaysay) ku guulaysatay in ay madaxaygii ifka soo dhigto. Isla markiiba cimiladii ifka ee igu cusbayd ee martay madaxaygii iyo dhabannadaydii dhaylada ahaa, ee laga soo “barokiciyay” qolkii yaraa ee diirranaanta iyo raaxada badnaa ayaa dhaliyay in aan ku fal celiyo warraaq aan afka kala qaado, markiibana aan kabbado hawo ka baxsan tii aan mandheerta ka nuugi jiray. Waxa se uu ahaa, goor kastana noqon doonaa, kala go’ iyo kala qaarnaan door (ahmiyad) u leh nolosha iyo taranta aadamaha. Waana, sida uu u dhigay Niitjee (Nietzsche), faylasuufkii Jarmalka ahaa ee noolaa qarnigii 19aad, in xilliga dhalashada oo keliya uu ilmuhu ahaanshiiyo qofeed oo gaar ah yeelanayaa, inta se isaga iyo hooyadii ay xudduntu isugu taallo, yaa odhon kara waa laba naflay oo midba ka kale ka madax bannaan yahay? Tusaalaha Niitjee waxa u markhaati kacaya gabayaagii Soomaaliyeed ee Cige Aw Cali oo tix uu lahaa ay ku jirtay“….Markii xigay caweys baan dhashoo, Cige la ii bixiyay..!”
Markii aan dhashay, xudduntiina sideeda u go’day, ma ay tuurin hooyo hilibkii yaraa ee qallalnaa, waxa ay se ku xidhay qoriweger, iyada oo sida dumarka Soomaaliyeed rumaysnayd awoodaha dahsoon ee qoriwegerka. Xilli kale markii uu kasoo wareegayna waxa ay hilibkii yaraa ee tawafsanaa ku xidhay sabeen, waana meesha ay ka timid waxa loo yaqaanno “Xuddunxidhka”. Xirribta (xigmadda) ka dambaysa xuddunxidhku waxa weeye in ilmaha yari (dheddig iyo labba) lagu dareen geliyo in uu reerka wax ku leeyahay. Maxaa yeelay, isaguba xilli aan sidaas u sii dheeraan doonin ayaa la ciidansan doonaa, waxana uu ka qayb qaadan doonaa howlaha kala duwan ee reerka oo ay ugu mudan tahay, uguna horrayso raacidda maqasha.
Beryahan dambe, dhulalka reer Galbeedka (Yurub iyo Waqooyiga Ameerika), waxa soo baxay habdhaqan la-yaab leh oo la yidhaahdo “Lotus Birth” oo ah in aan la goynin garka mandheerta, kaddib ilmuhu marka uu ifka u soo baxo ku sii xidhiidhsanaado mandheerta, jeeroo laga gaadhayo dhowr cisho, inta ay iskeed mandheertu uga fuqayso. Dadka sidaas yeelaa waxa ay uga jeedaan in la sugo (hubiyo) in ilmaha yari helo nafaqo dheeraad ah, isla markaana kala-xidhiidh furanka hooyada iyo ilmaheeduna noqdo mid ay ku dheehan tahay degganaan, marka la barbar dhigo habdhaqanka qallafsan ee foosha iyo jarista degdegga ah ee garka mandheerta. Mandheerta ilmaha ku xidhiidhsan ee sidan oo kale loo hayo, waxa la dhex dhigaa weel ay ku jiraan biyo milix leh oo la carfiyay, ama maro ayaa lagu duubaa, inta ay iskeed uga xidhiidh furmanayso ilmaha 3 ilaa 7 maalmood!
Xayawaanka dhexdooda, daayeerka jaadkiisu yahay Shimbaanze ee ku nool dhulka duudda ah (keymaleyda) Afrika, ayaa keli ah midka lagu yaqaanno dhalmada jaadkan oo kale. Xayawaannada kale, badankoodu, marka ay dhalaan, garka ama xadhigga mandheerta waa ay qaniinaan si ay u gooyaan, ka dibna mandheerta ayay cunaan, si aan habar dugaaggu u soo urinin, kaddiba dhasha uga cunin.
Sidan ay dumarka qaar kaga daydeen dhalmada jaadkan oo kale ah, waxa uu qofku is-weyddiin karaa, bal in aadamnimadi ay hoos ugu sii noqonayso noolihii ka hooseeyay! Iyada oo dhanka kalena, caddaanka wax takooraa, dadka diirka ama dubka madow, quudhsi awgii, iyo sida ay rumaysan yihiin, ku tilmaama “qaar jaranjaradii lagaga soo koray daayeerka, weli meel hoose ka soo fuushan”. Waxa kale oo dalalka qaar lagu arki karaa in dumarka qaar ay daneeyaan qurxinta xubintaas jidheed ee howl gabtay, isla markaana ay ka laalaaadiyaan hilqado dahab ah, kuulo, ama waxyaabo kale.
Dhinaca kale, dadka riyooyinka ka warransiiya, waxa ay u arkaan in xuddunta oo qof ku arko riyadiisa lagu fasiran karo“soo noolaanshiiyaha xidhiidho hore, iyo isu hilowga dad kala baaday”.
Guntii iyo gebagebadii, laga bilaabo maalintaas aan fiirada gaarka ah u yeeshay xudduntayda, la-yaab ma laha in dareen gaar ah oo kalgacal, kana badan intiisii hore, ii qabto hooyo, iyo in aan abaalkeeda sinaba loo gudi karaynin.
W/Q: Axmed Ibraahin Cawaale